2. Miss Universe Myanmar
3. Celebrity Movies
1. (LEAD) ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားတဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ထဲက ‘Autumn Morning’ ကို အကြိုဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ IU
2. ဗီဒီယိုကြော်ငြာထဲမှာ Seoul မြို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ကြော်ငြာပေးမယ့် BTS
3. ဒီဇင်ဘာလမှာ single အယ်လ်ဘမ်ထွက်ရှိမယ့် အဆိုတော် Rain
1. ချောင်းမကြီး ရေလျှံတုန်းက သန်းခ ဘာလုပ်နေလဲ - အစ/အဆုံး
2. ဆင်းရဲခြင်းပုံပြင် - အစ/အဆုံး
3. မထူးဆန်းသော ရထား - အစ/အဆုံး
ခေါ်သူနာဆင်တေးသံစဉ် အစီအစဉ်အား ရယူရန် ‘MPT Ring Tune’ button ကိုနှိပ်ပါ။
MPT Ring Tune
A Chit Ma Shi A Mone Ma Shi Ver1 - Soe Gyi
Song code : 0112315202
Provider : etrade
A Chit Ma Shi A Mone Ma Shi Ver2 - Soe Gyi
Song code : 0112316202
A Chit Ma Shi A Mone Ma Shi Ver3 - Soe Gyi
Song code : 0112317202
A Chit Nae Kan Chay Ver 1 - Soe Gyi Yuri
Song code : 0112318202
A Chit Nae Kan Chay Ver2- Soe Gyi Yuri
Song code : 0112319202
A Chit Ngat Tae Yout Kyar Nae Ma Chit - Soe Gyi
Song code : 0112320202
Song code : 0112321202
Bar A Yaung Lal Ver1 - Soe Gyi SZ
Song code : 0112322202
Bar A Yaung Lal Ver2 - Soe Gyi SZ
Song code : 0112323202
Bar Phit Chin Tar Lal Ver1 - Soe Gyi
Song code : 0112324202
ဈေးနှုန်း : ၂၁၀ ကျပ် / ဗွီဒီယို
Miss Universe Myanmar 2018 ပြိုင်ပွဲကြီးတွင်မြို့ကြီးများမှ ကိုယ်စားပြုဆန်ခါတင်အလှမယ်စုစုပေါင်း (၃၀) ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်များ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ၊ ပရဟိတလှုပ်ရှားမှုများ အစရှိသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများအား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်မှတစ်ဆင့် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အကြောင်းအရာဗွီဒီယို ၅ ဖိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေ နေ့များတွင် Video File ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဗွီဒီယို တစ်ဖိုင်လျှင် ၂၁၀ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Chin (Cho) Language)
ဈေးနှုန်း : 170Ks/Day
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို ချင်းချိုးဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Chin (Lizo) Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို လိုင်ဇိုးချင်းဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (East Kayin Language)
မန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို အရှေ့ ပိုးကရင်ဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Kachin Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို ကချင်ဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Kayar Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို ကယားဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Mon Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို မွန်ဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Myanmar Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Rakhine Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို ရခိုင်ဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Mobile Radio Daily Voice News (Sagaw Kayin Language)
မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို စကောကရင်ဘာသာဖြင့်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်လိုပါက ၀၁၂၃၉၉၁၀၃ သို့ ဖုန်းခေါ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ တရက်လျှင် ၁၇၀ ကျပ်ဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ၀၁-၂၃၉၉၁၈၈ တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။